डन हैनन् टोले गुन्डा हुन्, यीनलाई तह नलगाएसम्म चैनले बस्दिँन ~ FMS News Info
डन हैनन् टोले गुन्डा हुन्, यीनलाई तह नलगाएसम्म चैनले बस्दिँन
-सर्वेन्द्र खनाल, एसएसपी, अपराध महाशाखा
महिनौ लगाएर एउटा गुन्डालाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ । गुन्डाले राजनीतिक, आर्थिक पहुँच लगाएर कानुनसँग लुकामारी गर्दै केही समयमै मुक्त हुन्छ । गुन्डाले नै डिस्को चलाउँछन् । ठेक्कापट्टा कब्जा गर्छन् । चेलिबेटी अफ्रिका, खाडी पुर्याँछन् । व्यापारीसँग हप्ता असुली गर्छन् । काठमाण्डुलाई राज्यले वडामा विभाजन गरे जस्तै गुन्डाहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्र तोकेका छन् । महाराजगञ्जमा हप्ता उठाउँने एउटा ठमेलको अर्को, बौद्धको अर्को । आफ्नै बाउको बीर्ता जसरी समाज लुट्नेहरु फुलमाला लगाएर हिँडने, १० करोड लुटेर एक लाख बाँडेर समाजसेवी हुने । विशिष्ट मान्छेलाई प्रमुख अतिथी बनाएर लुटको धन, गुन्डाको पहिचान लुकाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ ।
करिब एक डेढ महिना अघि सुन्धाराबाट रावण भन्ने गुन्डालाई पक्राउ गर्न जाँदा १० –१२ जना गुन्डा मिलेर प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजे । गुन्डाको मनोबल त्यहाँसम्म पुगेको छ । हामीले पनि गोली चलायौं र नियन्त्रणमा लियौं । हप्ता असुलीको पैसाको बलमा हुलका हुल मोटरसाइकलमा हिँड्ने र समाजलाई नै आतंकित बनाउने गुन्डाहरुलाई तह लगानै पर्छ । गुन्डाले आफ्नो शान देखाउँने अनि प्रहरी चाहिँ लुरे भएर बस्न सक्दैन । गुन्डालाई पनि तह लगाउने नसक्ने भए प्रहरी किन चाहियो ?
टोल–टोल छुट्याएर हप्ता असुली गर्नेहरुलाई मानिसहरुले डन पनि भन्छन् । तर मेरो भाषामा यी टोले गुन्डा हुन् । आतंक सिर्जना गरेकै भरमा यीनले राजनीतिक संरक्षण पाएका छन् । लुटेकै धनबाट व्यवसाय सुरु गरेर अहिले व्यवसायी भएका छन् । अनि आफु माथि बसेर तल अरु गुन्डा परिचालन गरे यीनीहरुले गुन्डाराज चलाइरहेका छन् । सोझो नजरले हेर्दा यीनीहरुले कानुन मिच्ने काम गरेको देखिदैन । तर परिचालन गर्ने र अन्डरवल्र्ड चलाउनेहरु अझै बाँकी छन् । यस्तालाई हामीले पक्राउ गर्यौं भने भोलिपल्टै छुट्छन् । यस्ता व्यक्तिको गतिविधि प्रहरीले गहिरोसँग अध्ययन गर्छ र कारबाही गर्छ । प्रहरीले गर्ने कारबाही भनेको सधै पक्राउ गरेर मुद्धा दर्ता गर्ने मात्रै हुँदैन । प्रहरीमाथि नै भिड्न खोज्नेलाई प्रहरीले गोली चलाउँछ । त्यो बेला त्यस्ता मारिन पनि सक्छन् ।
त्यस्ता गुन्डा मारिँदा नागरिकको बाँच पाउँने अधिकारहनन् भयो भन्दै संसदमै कोकोहोलो मच्चिन्छ । गुन्डा निश्चित अवस्थामा मारिन्छन् । अरुलाई दुःख दिने सबैलाई प्रहरीले गोली चलाउँदैन । १० वर्ष १२ वर्ष पुराना रहस्यम हत्यामा संलग्नलाई पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । पाँच जनालाई घाँटी रेटेर हत्या गर्नेलाई समेत हामीले पक्राउ नै गर्यौं । बाँच्न पाउने अधिकारहनन् नै गर्ने भए त्यस्तालाई प्रहरीले किन बाँकी राख्यो ?
केही समय अघि चरी भनिने दिनेश अधिकारी मारियो । अहिले घैंटे भनिने कुमार श्रेष्ठ मारियो । प्रहरीलाई नै आक्रमण गर्ने हदसम्म पुगिसकेका गुन्डाको आक्रमण सहेर प्रहरी अब बस्दैन । अवस्था आउनेबित्तिकै गोली चलाउँछ । यस्ता प्रवृत्ति भएका अरु पनि छन् । उनीहरु कसैले पनि राजनीतिक संरक्षणमा सधै लुटको साम्राज्य चलाएर बस्छु भन्ने नचिताए हुन्छ । राजनीतिक संरक्षणबाट जोगिन सक्ने भए चरी र घैंटे कारबाहीमा नपर्नु पर्ने थियो ।
दूनियाँले दिपक मनांगे भनेर चिनेको व्यक्तिलाई राजीव गुरुङ बनाइयो । अनि मुक्ति दिइयो । कसले दियो, किन दिइयो ? यो पनि अब खोजी हुनु पर्छ । प्रहरीले मात्रै आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर हुँदैन । आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्नेहरुलाई पनि कारबाही हुनु पर्छ । एउटा गुन्डा प्रहरी कारबाहीमा मारिँदा राजनीतिक कम्पायमान हुन्छ । कुनै निर्दोशलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो वा कारबाही गर्यो भने आउन न नेताहरु हामीसँग । हामी ससम्मान उहाँहरुको कुरा सुन्छौ । हामीले गलत गरेका रहेछौं भने तत्काल सच्याउँछौ । तर आमनागरिकका लागि एक बचन नबोल्ने गुन्डाको मानवअधिकारको कुरा मात्रै उचाल्नेहरुलाई हामी पनि वास्ता गर्दैनौं । उहाँहरुको काम बोल्ने हो बोलिरहनुहोस् । प्रहरीको काम कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो त्यो प्रहरीेले गरिरहन्छ । नेताज्यूहरु गुन्डाको हैन जनताको नेता भइदिए राम्रो हुने थियो ।
म काठमाण्डुकै बासीन्दा हुँ । तर मैले बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषामा पनि काम गरेको छु । अपहरणमा परेका कैयनलाई उद्धार गरेँ । मलाई मधेसको छोरा भन्ने उपमा पनि जनताले दिए । म जहाँ काम गर्छु त्यहा मैले कानून पालना गराउँने हरसम्भव प्रयास गरेको छु । अनि आफ्नै क्षेत्रमा आउँदा चाहिँ यो गुन्डाराज टुलुटुलु हेरिरहन कसरी सक्छु ? काठमाण्डुमा कसको लुटको साम्राज्य कस्तो छ त्यो मलाई सबै थाह छ । यो मान्छे असल, त्यो गुन्डा, त्यो डन भनेर मलाई कसैले नसिकाए पनि हुन्छ । जसलाई जस्तो व्यवहार गर्नु पर्ने हो न्यायोचित ढंगले प्रहरीले गर्छ ।
यसअघि पनि मैले सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको थिएँ । फेरि पनि भन्छु, कुनै पनि टोल वडामा कुनै गुन्डाले दुःख दिएको छ भने मलाई सोझै सम्पर्क गर्नुहोस् । तपाईको गुनासो म आफै गोप्य राख्छु । र दुःख दिने गुन्डालाई तह लगाउँछौ । गुन्डालाई तह नलगाएसम्म मेरो कतव्र्य पूरा पनि हुँदैन ।
(ध्रुव रिजालसँग भएको कुराकानीमा आधारित)kathmandutoday.com
भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
Labels: Featured, Interview, News